Mpanao politika sy firaisamonim-pirenena : « Takinay hivoaka amin’ny herinandro ny lalàm-pifidianana » | NewsMada
Mpanao politika sy firaisamonim-pirenena : « Takinay hivoaka amin’ny herinandro ny lalàm-pifidianana »
Nivory tetsy Antaninarenina, afakomaly ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena maromaro. Nitaky hamoahana ato anatin’ny fotoana fohy ny volavolan-dalàm-pififidnana izy ireo noho ny hakelin’ny fotoana.
Tapaka fa manome herinandro ny governemanta mba hamoahana izany ireto mpanao politika ireto. “Mitaky fanolorana anay ny volavola savaranonandon’ny lalàm-pifidianana vaovao izahay hahalalan’ny besinimaro ny marina, ao anatin’ny mangarahara. Omenay hatramin’ny alakamisy 9 novambra izao ny fitondrana hamoahana izany”, hoy ny fanambarana iombonana novakin’ny mpitondra tenin’izy ireo, Ramarojaona Yves. Nohitsin’ny fanambarana fa atao izany noho ny hamehana satria iaraha-mahalala fa amin’ny volana desambra 2018 ny tokony hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena, araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana.
Korontana amin’ny fifidianana 2018
Niantso ny fianakaviambe iraisam-pirenena koa ireto mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena ireto mba hanohana izany ezaka atao ho amin’ny fametrahana ny demokrasia eto amintsika izany.
Ankoatra izany, niraisan’izy ireo hevitra fa tokony hahitsy ato anatin’ny fotoana fohy ny lalàm-pifidianana satria maro ireo teboka mitondra ho any amin’ny tsy fahatomombanana ary koa mba ialana amin’ny korontana amin’ny fifidianana ny taona 2018.
Anisan’ny nitondra ny heviny ny filoha nasionalin’ny Tim, Ravalomanana. “Manaiky ny hanohana izao dingana izao ny Frantsay sy ny Vondrona eoropeanina. Tokony ho dingana azo antoka anefa ny hirosoana fa tsy fivoriana tahaka ny mahazatra ka tsy ahitam-bokany”, hoy izy. Tsy mifanalavitra amin’izany koa ny nambaran’ny avy amin’ny Freedom, notarihin’ny filohany, Rakotondrazafy Lalatiana. “Mety ho tonga amin’ny fampitambaran-kery noho ny tombontsoam-pirenena sy ny vahoaka izao mba tsy ho tahaka lalàn’ny fifandraisana sy ny serasera izany ka hiova an-dalana sy tsy horaisina ny hevitry ny sasany”, hoy izy.
Miantso fahamalinana sy fihaonana ny antoko politika
Nambaran’ireo komitin’ny fakan-kevitra tamin’ny alalan’Andriamandrato Ihanta fa tsy mety ny fomba nandrafetana io volavolan-dalàm-pifidianana io. “Ahina tsy hitondra fitoniana izany satria tsy voahaja ny hevitry ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena ary koa ny sehatra iraisam-pirenena… Tokony ho mailo isika ary hanohy ny fihaonana”, hoy izy.
Na izany aza, tsy mbola nanambara ny hataony izy ireo raha dila io fe-potoana, herinandro nomeny ny fitondrana, io.